Daawo: C.raxmaan C.shakuur oo cabsi Noloshiisa u Qaba iyo Universal Tv Waxa kala Qaybsaday |Waraysi Xiiso leh | Kalshaale
Daawo: C.raxmaan C.shakuur oo cabsi Noloshiisa u Qaba iyo Universal Tv Waxa kala Qaybsaday |Waraysi Xiiso leh
Feb 14, 2018 - 10 Aragtiyood
Muqdisho (Kalshaale) Siyaasiga C/Raxmaan C/Shakuur oo wareysi siiyay Tv-ga Universal ayaa ka hadlay dhibaatooyin dhowr ah oo ka dhashay weerarkii dhawaan lagu soo qaaday, Wuxuu sheegay inuu aaminsan yahay in mucaaradnimada uu ku heysto taageero badan, waxa uuna farta ku goday in baaritaan la sameeyey ay ku ogaaden in dadka ugu badan ee taageera dowlada ay yihiin kuwo maalmo un leh Akoono.
Kkkkk war xaarka iskadu midhaa dowladaha uu shegayo waa kuwii uu u ahaan jirey jajuuska because ninkii dowlad kale jajuus u ahaanjirey hadii uu shaqadii kadago waa ladilaa oo uu kuwa kale u noqdo Kkkkk jajuus foqal jajuus adeer waqtigaaga ayaadhimanaa lakiin inaad sinolato ma aheeyn adiga iyo kuwa kula midkaa oo danyeer nimada ku qaraabta wbt
Kabadkiisu Nimuu Soo Katimaay, Shisheeye U Kalkaal Ka kaadsan waayeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee,
Karaamaba Nimaay kala Kuutiyeen, Kadhoodhad
Kibis Quudheedh Kunbis Lakor Saarey, Qarankiisa
ku Kadaaya, Koodhka In Lagu kaddeedo, Ayaa U
kasabeee, Kasba Nimaay kala kooreeyeen, Makaadsado, Kadhoodhadii kibista Quudheed kurka
Loo Kamilaay, Qarankiisa waa Inuu ku kadaaeeeee,
Kufriguu Badeyda ku kaalmeeyey, koodhba Lama
Hadii kurbaduu Geystey, karbaash Lagu karkariin Lahaa Masii kubadeen, Qaranka Oo Uu U Karaamaba
TIRROO kuwii koofiladu kadeedeenNeeeeeeeeee,
Yuhuudu kuwey karaamo Tirtaay, Ma kalmeysteen,
Nimuu kaskiisu kaamil Yahayeeeeeeeeeeeeeeeeee,
Walee Somaliya waxbaa haysta.
Kulahaa in taalo nalo dhiso ayay ahayd.
Alshabaab kan may naga dilaan aan u ducayneekk
Dhiiga Somalida ayuu shaqo ka dhigtay.
Saaxiibkey C/raxmaan wuxuu caanshaqey Kursiga Rasalwasaare Kheyre Kufadhiyo, waxaanse ka xumahey inuusan wali quusan.
Geedi Axmaar ayaa uga dhow inuu bedalo Kheyre.
Aniga hadalka ninkaan waxaan u arkay inuu ka wado beeshiisa Cayr oo Xamar xoog ku lahaa in maanta hubkii laga dhigay in aarsi ama nacayb beeshiisa loo qabo asaga loo weeraro, ama inuu dad ku kicinayo macnaha, beel ahaan ayaa la ii beegsanayaa.
Dadka sida Ina Cabdishakuur waa in dareemaan in Xamar oo nabad noqotay ayaga waxba uga qasaarayn.
Ninkaan cabsi in soo foodsaartay Ayaan u fahmay hadalkiisa.
Hadda ka hor wuxuu yiri martidii ayaa naga xoog badnaatay asaga oo Farmaajo iyo Khayre u dan leh!!…kkkkkkkkk
Asagoo Guriceel ku dhashay..kkkkkkkkk
Markaan Faftanka ka saarno ninkaan beel uma hadlo ee wuu ku qaraabtaa ayaguna ( Ceyr) waaba dhaqankooda iney mucaarad ahaayeen ilaa Dowladdii 1950gii ee C/llaahi Ciise.
-Shacabka Xamar waxey rabaan Nabad iyo horumar,
– Waa shacabka ogol iney dhiibaan dhamaan Kharashka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada, AYAGOON WALIBA QEYBEY XAQA u lahaayeen dib loo gelin, ( Sida Amaanka,nadaafadda, Bilicda iyo Dalxiiska).
Buulo-barde ayuu ku shashey oo ilaa dugsiga sare ka soo dhigtey hadana maanta kama noqonkaro xataa Macallin dugsi dhexe (Why)
Because Federaal Itoobiya,
Buulo-barde gooniyaan u leeyahey Xamarna waan kula leeyahey.
** Goof Wacbuudhan waa Wadaag **
Anigaba Xamar ku dhashay in Visa la waydiiyo ka biqin?? Kkkkk
Dxb Wacbuudhan Xamar ma laha Adan Tabaal ugu sokeysay degaan ahaan 100 sano ka hor!
Sida dad badan usoo degeen ayey udoo degeen.
Sida Mareexaan Gedo loogu yaaqaan oo ognahay in Gslguduud kasoo guureen ana sida Hartiga Kismayo dheegta.
Guryaha Xamar kuyaal in Wacbuudhan dhisan waa ogtahay.
Marka sxb qoloba meel ku habsatay..
Saas u faham.😝
Warka waad ku dheeshey oo waxaad ka dhigtey War Muluqyo, marba hadaad Sintey Ninka Caliyaalo degan intow u jiro Xamar, iyo Ninka Jariiban degan intow u jiro Kismaayo.
-Kismaayo Doonaa ku keentay, Doona waa kaa qaadey..
** Kismaayo Doonaa ku keentey, ana Dibilaa Xamar i keenay**
Waa u gaartay land of punt, oo Majeerteen ah, in qabiilka uu ka dhashay Cabdirahmaan Cabdishakuur ee Ceeyr, kuwaas oo u shaqeeyo Majeerteenka, in uu ku dhaho waxa uu dhahay land of punt.
Annigana waxaan kusii darri lahaa, ninkaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur, iyo waxii daanyeer Ceeyr ah, oo sidiisa u fakira in la dilo ayeey istaahilaan, oo la’aaso, sida ciyaalka ilaalinayay kabahooda xabaal wadareed loogu aasay, sida eey argagixisda alshabaab u dhameeysay Ceery badan oo daanyeero ah, sida uu Mareeykan u laayay Ceeyr badan oo daanyeero ah.
Dadku hadii eey wasaq noqdaan, oo eey daanyeerka oo kale caqligiisa yeeshaan, sidaas Ceeyrka loo baabi’inaya, iyagana kuwa baabi’inaya ugu shaqeeynayaan ayaa ku dhacdo. Daanyeero aanan caqli badan laheeyn.